I-Cool Colorful Retro Efficiency Apt.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAngelica
I-Cool Colorful Retro Charm kwiphakheji encinci emnandi. Igumbi elisebenzayo elinomnyango wabucala ongasemva kwekhaya lenkulungwane enemibala yamagcisa alapha. Le ndlu ithokomeleyo ihonjiswe yonke ngempahla yakudala yaphakathi kwinkulungwane, kubandakanya izitya kunye neeglasi. Thatha uhambo ubuye ngexesha lo gama usayonwabela ubutofo-tofo bale mihla, njenge-air conditioning, isikhululo sokutshaja, i-HDTV kunye ne-wifi. Ibekwe ekoneni ukusuka kwiNdlu yeBali leKrisimesi kumazantsi esiphelo sendawo yaseTremont enefashoni. Yiza kundwendwela!
Ukuqalisa usuku lwakho ngokufanelekileyo, ifulethi liya kuba nekofu ephantsi kunye nokhetho lweeti.
Imithi emikhulu emikhulu idala indawo yomthunzi, inceda ukunciphisa ingxolo yesixeko kunye nokugcina ubushushu basehlotyeni. Izitulo zegadi kunye netafile yepiknikhi ekhoyo ukuze uyisebenzise emva kwendlu. Ininzi indawo yokupaka ezitalatweni kodwa indawo yokupaka ngaphandle kwesitrato iyafumaneka nakwisango elikhethekileyo elingemva kwendlu.
4.83 ·Izimvo eziyi-161
4.83 · Izimvo eziyi-161
I-Tremont yenye yezona ndawo zindala zaseCleveland ezinembali etyebileyo esukela kwiminyaka yoo-1800s. Namhlanje lo mmandla waziwa ngokuba yindawo yokutyela ephumelele amabhaso, indawo yobugcisa edlamkileyo, iivenkile zokutyela, iicawe ezibukekayo, kunye neziganeko ezizele lulonwabo ezizisa uluntu kunye nokutsala iindwendwe ezisuka kulo mmandla nakwilizwe liphela.
Indawo yokuhlala yindlela elula yokuya kwiNdlu yeBali leKrisimesi, apho uya kufumana i-gastropub yethu entle, iRowley Inn, ivulekele isidlo sakusasa ngesidlo sangokuhlwa. IKofu yeTerrapin, enendawo yompheki wepastry, yindawo entle yecaffeine kunye nokunyanga.
Iphedi yezitshixo ukuze uzijonge, kodwa ndilapha ukunceda. Ndiligcisa eliziqeshileyo kwaye ndihlala kwaye ndisebenza ikakhulu kwindawo. Ndikwindlu ephezulu kwaye ndinestudiyo sam somculi kwisakhiwo sevenkile esisemva kwendlu. Ehlotyeni unokundifumana ndilungisa iigadi zam, okanye ndinocango lwestudiyo oluvulwe luvuliwe ndibambe umoya omtsha. Ndijikeleze kakhulu kwaye ndingakuvuyela ukunceda nangayiphi na indlela endinokuyenza ukuze uzinze kwaye uqhelane noko uCleveland kunye nommelwane unokukunika kona. Ngoko buza nje.
Iphedi yezitshixo ukuze uzijonge, kodwa ndilapha ukunceda. Ndiligcisa eliziqeshileyo kwaye ndihlala kwaye ndisebenza ikakhulu kwindawo. Ndikwindlu ephezulu kwaye ndinestudiyo sam s…